Duulli guyyoota 16 miidhaa koorniyaa waliin walqabate mormuun adeemsifamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Roggeeeyyiifi dhimmamtooti wal-qixxummaa dubartootaa miidiyaa hawaasummaa, duula miidhaa dubartootaa sababii saala isaaniin irra gahu hubachiisuufi gaafatu adeemsisaa jiru.
Sosochiin kuni mataduree ijoo garaagaraan waggaa waggaatti sadaasa 25 hanga Mudde 10 tti sadarkaa idila addunyaatti ni adeemsifama. Barana 'Anas na dhagahaa' mata duree jedhuun adeemsifama jechuun kan nutti himte Akliil Solomoon sochii dubartootaa Yunivarsiitii Finfinnee Yellow movement jedhamu keessatti qindeessituu duula kanaafi warraaqsa dubartootaa Setaawiititti hoggantuu piroojektiiti.
Dubartoonni addunyaa sababii koorniyaa isaaniif miidhaa irra gahu sagalee isaanii dhageessifachuuf sochii taasisani dha.
Akliil seenaa isaanii isa dirqiidhaan gudeedaman, qoccolaman, miidhaan xiin-sammuu irra gahe, reebichaafi miidhamoota biroollee miidiyaa hawaasumma irratti qooduun akka namooti hubatan yaalu.
Dubartoonni 137 Addunyaarraa guyyaa tokkotti ajjeefamu
Bartee hawaasni keenya yeroo dubartiin miidhamtu 'isheen maal gooteti' jechuun deebisanii ishuma komatan sirrii akka hin taaneefi dubartoonni gudeedamaniifi miidhaan saalaa biraa irra gahullee balleessaa isaaniin akka hin taane hubachiisuu dabalat.
Dubartoonni yeroo sarbamnis tahe miidhaan yeroo irra gahu maaliif 'akka callisan', seerri dubartoota miidhu akka sirreefamuufi dubartoonni waa'ee dhimma kanaa duula deebisanii ittiin of gaafatani dha jetti Akliil
Duula guyyoota kudha 16 dhimmoota miidhama koorniyaa bu'ureefate hubachiisuuf miidiyaa hawaasummaa irratti taasifaman dabalataan mariifi agarsiisotille ni taasifamu.
''Min labsa neber?'' yookiin 'Maal uffattee turte' mata duree jedhuun uffanni dubartoonni yeroo dirqiidhaan gudeedaman uffatanii turan warraaqsa dubartootaa Seetaawiitiin gaafa wiixataa Muuziyeemii Finfinneetti agarsiisaaf dhiyaateera.
Haalli uffannaa dubartii gudeedaaf ni saaxila bartee jedhu morma.
Ogeessi seeraa Alamaayahuu Baacaa maricharratti hirmaate seerri yakkaa Itoophiyaa dirqiidhaan gudeeduu yakka namoota wal-hin fuune gidduutti godhamu malee dirqiidhaan gudeeduu gaa'ela gidduutti godhamu hin ilaalu.
Kana malees dirqiidhaan gudeeduuf seericha hiika, 'dirqisiisuun waan raawwatamu' jedha malee 'fedhii' waan jedhu hin dabalatu kunimmoo seerichi qaawwa akka qabaatu taasiseera jedha.
''Wayita wal-quunnamtiin saalaa raawwatamu fedhiin dhimma murteessaa dhas'' jedha.
Marii kanarratti kan hirmaatan godina Shawaa Bahaa aanaa Adaamaatti itti gaafatamtuu dhimma dubartootaa waajjira poolisii inspeektara itti aanaa Sintaayyoo Battalaa,
'Biyya keenyaafii naannoo keenyatti namoonni kan gudeedaman sababa ufftaan otoo hin taane namni tahe jedhee rakkoo yookiin fedhii dhuunfaa isaa guuttachuuf yakka raawwatuu dha' jedhan
Haalli uffannaa rakkoo dubartii tahuu hin danda'uu bara kan dhiirotis gudeedamaa jiru. Kanaaf namoonni 'dubartoonni haala uffannaa isaaniif gudeedamu' yaada jedhu ofiirraa gatuu qaba jedhu inspektara itti aanaa Sintaayyoon.
Siyaannee Annileey Amantee, dhimma koorniyaa irratti barnoota ishee digirii sadaffaa yunivarsiitii Finfinneetti hordofaa jirti. Dirqiidhaan gudeeduu dabaltee fuula dubartii irratti asiidii dhangalaasuun rakkoowwan dubartoota irratti gahani dha jetti.
Haa tahu malee hawaasni keenyi rakkoo kanaaf furmaata kennaa hin turre barumsi gahaanis kennamaa hin turres jetti.
'Namoonni barumsi gahaan kennamee jira jedhanii amanan jiru, garuu rakkoon kun akkam gudda akka taheefi furmaata akka hin arganne baadiyyaarra deemee waani hojjedhuuf argeera' Kanaaf duulawwan akkasii beekumsa uumuufi furmaata kennuu irratti shoora guddaa qabu jetti.
Inpeektara Ittaana Sintaayyoos hawaasni dhimma dubartii dhimma keenya jechuun dhufaa jira garuu gahaa miti kana boodas hojiin hojjetamuu qaba jedhu.
Ogeessi seeraa Alamaayahuu Baacaan 'Dirqiidhaan gudeeduu hambisuuf inni jalqabaa dhiirri of-sassaabuu qaba' jedha. Inni itti aanu namooti of barsiisuufi mirgoota namaa kabajuu qabu.
Haleellaa ‘abbaan torbee' poolisoota magaalaa Naqamtee irratti raawwateen lubbuun darbe
Ameerikaatti mormitoonni sochii dhorkame cabsuun daandii dhuunfatan
Sudaan Kibbaa daangaa Itoophiyaarratti buufata waraanaa Masriif kennuuf walii hin galle jette
Addunyaa irratti Narsootni 600 ta'an Covid-19'n du'aniiru jedhame
Dhalattoota Somaalii waan Waaqatti hin amanneef doorsisni ajjeechaa irra gahu
Biil Geetis talaalliin qabatanii irree keenya keessa waa awwaaluu fedhuu?
Dhirsaafi niitiin Nabiyyuu Mohaammad arrabsitan jedhamuun duuti itti murtaa'e nuuf birmadhaa jedhan
Guugil icciitii dhuunfaa hordofuusaatiif himannaan $5bn irratti baname